Iintengiso zeXesha leNene ngeZapp360 | Martech Zone
Indawo yeZ360 Ivuselela indlela ezinikezelwa ngayo kwiintengiso ezihambayo kubathengi ngokwendlela yoyilo kunye nokufaneleka kwayo. Intengiso yemveli yeselfowuni ikakhulu ineenkampani ezisebenzisa nje intengiso yesikhangeli sedesktop- eyilelwe kakubi, engajoliswanga kwaye ayiqwalaseli indlela abasebenzisi abazibandakanya ngayo nezikrini ezincinci.
Intengiso yefowuni yimveliso yezigidi ezili-14.3 zeedola kwaye zonke iingqikelelo kukuba iya kuqhubeka nokukhula, kodwa oku akuyi kwenzeka kude kube lixesha lomsebenzisi lokugqibela libekwa ngaphambili. Ke uZapp ubuyele kwikamva ngokwenza isicatshulwa sokubhengeza isicatshulwa esiza kuzisa unxibelelwano ngokungxamisekileyo kunye nomxholo kwisantya somsebenzisi… esikwixesha lokwenyani.
Olunye umahluko ophambili weqonga sisantya apho intengiso inokuhamba khona. Umzobo, okanye intengiso ebonakalayo ithatha ixesha ukudibanisa, kodwa isicatshulwa, silula njengoko siza. Kwaye unikwe indlela abantu abanxibelelana ngayo nge-twitter ngokukhawuleza namhlanje, isicatshulwa sisixhobo sonxibelelwano esihlala ngexesha elifanelekileyo kwaye silungele abaphulaphuli kuyo yonke indawo.
The Indawo yeZ360 iqonga lihambisa umyalezo oskroliyo ongaziwayo wokufikelela kubalinganiswa abali-140 abangene kubaphequluli beselfowuni okanye iiapps ngexesha elichazwe ngumthengisi. Abathengi banokuwucofa nje umyalezo ukuze baye kwindawo, bafowune, babone ividiyo, bahlawulele isigqebhezana okanye umhlaba kwiwebhusayithi yomthengisi. Eli nqanaba lokukhawuleza kunye nokunxibelelana liqhuba amava atyebileyo kwaye lihambisa amaqondo okuguqula agqithe kude kumndilili wecandelo.
Iqonga leZapp360 elihleli ngasemva kweentengiso kulula ukuseta, ukulawula, kunye nemilinganiselo ejolise kwimikhankaso yentengiso yeselfowuni ngexesha lokwenyani (ii-CTRs njlnjl.) Ke awulindanga ngxelo ekupheleni kwephulo ukubona ukuba iyasebenza na. okanye hayi.
Iintengiso zilula kwiiarhente kunye neempawu ukuseta nokwenza. Njengomzekelo-ukuba ibali leendaba liyaphuka, isiganeko senzeka, okanye imo yezulu ithathe indawo embi, kwaye imveliso okanye inkonzo yabo iyahambelana naloo meko, banokuphendula kwangoko (okanye ngokukhawuleza kangangoko banako yiza nentengiso ye-pithy ngoonobumba abali-140 okanye ngaphantsi).
Eyona nto, Indawo yeZ360 Inobuhlobo kumanejala wentengiso njengoko injalo kumsebenzisi wokugqibela ejonge intengiso. Cinga ngayo njenge-tweet onokuyiqhuba kwiphepha lewebhu elifanelekileyo kwi-browser yeselula ukuba umthengi sele ejonge. Ulwazi oluchanekileyo kunye nomnxeba kwisenzo kwindawo osele ubandakanyekile kuyo. Ngentengiso yexesha lokwenyani, umthengisi unokuqhuba ukubandakanyeka okungcono kunye nokucebileyo phakathi kwabathengi kunye neentengiso abazibonayo, njengoko zifike ngexesha elifanelekileyo kwaye kufanelekile.
tags: inethiwekhi yentengiso yeselfowuniiintengiso eziphathwayoIxesha elilungilezapp360